Tsikaritr’i Etiopia fa ambany kalitao ny tetikasa sy ny vokatra Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Tsy maningana ao Etiopia ny ahiahy amin'ny kalitaon'ny fotodrafitrasa sy ny vokatra Shinoa
Voadika ny 23 Oktobra 2021 6:19 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Español, English
Nahazo Lisansa “Filentehan'ny masoandro ao amin'ny tanàna misandratra: Addis Ababa” avy amin'i jeanotr, natontan'i Giovana Fleck / Global Voices CC BY 2.0
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Mahlet Fantahun.
Iray amin'ireo singa manaitra indrindra amin'ny lahateny momba an'i Shina any Etiopia ny fomba nanasongadinan'ny fitantarana ofisialin'ny governemanta ny haben'ny tetikasa mahavariana Shinoa, na ny fananganana fotodrafitrasa lehibe amin'ny làlambe sy ny lalamby na ny fanafarana entana ilaina toy ny vaksiny, finday ary akanjo, na dia matetika manasongadina ny kalitao ambany amin'ireo tetikasa sy vokatra ireo aza ny fitantarana malaza.
Matetika milaza ny governemanta Etiopiana fa manamora ny fampandrosoana ny firenena ny firotsahan'ny Shina ara-toekarena ao Etiopia. Raha ny marina, tamin'ny taona 2019, nijanona ho loharanom-bola vahiny lehibe indrindra any Etiopia i Shina. Saika mandrafitra ny antsasaky ny trosa ivelany an'i Etiopia ihany koa ny governemanta Shinoa, izay tombanana ho 13,7 miliara dolara Amerikana. Miompana amin'ireo tetikasa fotodrafitrasa lehibe ny ankamaroan'ity trosa ity izay mariky ny fivoaran'i Etiopia ihany koa, toy ny lalamby Addis-Djibouti. Nitombo be ihany koa tao anatin'ny roapolo taona lasa ny varotra Shinoa-Etiopia, ahitana ny fanondranan'i Shinoa mankany Etiopia tombanana ho 2,37 miliara dolara Amerikana tamin'ny taona 2019.
Misalasala ny hevi-bahoaka Etiopianina
Mifanohitra amin'ny fankasitrahana ofisialy, matetika manakiana ny kalitaon'ireo tetikasa ireo sy ny vokatra shinoa amidy any Etiopia ny vahoaka Etiopiana.
Fanamarihana malaza iray nosoratan'ny mpaneho hevitra iray tamin'ny solon'anarana Lalibela, ohatra, miresaka momba ny tetikasa Shinoa ho an'ny fotodrafitrasa lalambe mampifandray an'i Gashena amin'ny tanàna manan-tantara ao Lalibela, faritra Amhara, fantatra amin'ireo fiangonana ambanin'ny tany. Natomboka valo taona lasa izay ny tetikasa, saingy mbola tsy vita. Nandritra io vanim-potoana io, efa nila fanamboarana marobe ny lalana, milaza fa tsy manara-penitra ilay fananganana. Nanolo-kevitra ny mpanoratra ny lahatsoratra fa tsy tokony hangina ny tompon'andraikitra sy ny fiarahamonina rehefa miharatsy hatrany ny kalitaon'ny fanamboaran-dàlana. Nampiseho sary ahitana tetezana nirodana izay ao anatin'ny tetikasan-dàlana ny mpanoratra.
Nahasarika fandinihana lehibe ihany koa ny tetikasan'ny fotodrafitrasa Shinoa nosoniavina, toy ny Light Rail, rafitra metro anaty tany natomboka tany Addis Ababa tamin'ny taona 2015. Nilaza ny media BBN, haino aman-jery an-tserasera fa nafainganina ny fananganana ny Light Rail noho ny fifidianana nasionaly tamin'ny taona 2015, ary niharatsy ny kalitaon'ny tolotra nandritra ny taona maro, tao anatin'ny tantara, mitaraina ireo mpandeha fa simba matetika ireo lamasinina, sy noho ny fitsabahan'ny tolotra mahazatra amin'ny lozam-piarakodia sy ny fahatapahan'ny herinaratra . Na dia ny Etiopiana aza no manome ny tena tolotra, mifamatotra amin'i Shina sy ny fampindramam-bola Shinoa ity fikambanam-bahoaka (orinasa) mifandraika amin'ny tetikasa ity.
Tao amin'ny tantara iray miavaka momba ny Light Rail navoakan'ny BBC Amharic ary niadian-kevitra be anjotra, mitaraina ny mpandeha noho ny fahatarana hatramin'ny 45 minitra sy ny fijanonana tampoka mandritra ny dian'izy ireo noho ny fahasimbana. Manasongadina ireo olana amin'ny fikojakojana ireo lamasinina Light Rail ny tantara. Raha ny filazan'ilay Etiopiana mpamily ny fiaran-dalamby, ny antsasaky ny lamasinina tany am-boalohany ihany no miasa ankehitriny noho ireo kojakoja sarotra hita avy any Shina. Ao amin'ny tantara, nilaza ny talen'ny seraseran'ny Etiopiana Railway Corporation fa fiarandalamby 20–28 no vonona hiasa isan'andro fa tsy ny lamasinina rehetra akory no afaka miasa tanteraka. Miaiky ihany koa izy fa tsy tao anatin'ny fifanarahana tany am-boalohany nosoniavina tamin'ny mpiara miasa Shinoa ny fanomezana kojakoja fanampiny .
Nisedra fandinihana lalina avy amin'ny fampitam-baovao sy ny daholobe ihany koa ny Lalam-by Addis-Djibouti malaza izay mampifandray an'i Etiopia tsy misy ranomasina mankany Djibouti . Mampiseho tafatafa niarahana tamin'i Awel Wegris, lefitry ny minisitry ny fitaterana Etiopia ohatra ny tatitry ny Fana Broadcasting Corporation, sampam-pahitalavitra mifandray amin'ny governemanta, izay nilaza fa nijanona tsy niasa in-163 ny lamasinina tao anatin'ny telo taona. Nilaza koa izy fa olona 27 sy biby 875 no naratra vokatr'ireo fiaran-dalamby ireo. Nanamarika ihany koa ny tatitra fa nanana fatiantoka 114 tapitrisa birr mahery tamin'ny fandaniana amin'ny fikojakojana sy ny onitra ny tetikasa lalamby.
Ankoatra ny kalitaon'ny fotodrafitrasa, maro ireo adihevitra malaza mijery akaiky ny kalitaon'ny vokatra sinoa amin'ny fomba manesoeso. Ohatra, tao amin'ny lahatsoratra iray vao haingana tao amin'ny Twitter izay nitaraina momba ny kalitaon'ny kiraro sinoa, Yordanos Odalo manoratra fa rehefa tratra ny masoandro ilay kiraro, dia mihitatra 37 ka hatramin'ny 40 ny habeny. Mpanoratra iray hafa nilaza fa maharitra iray volana ny kiraro sinoa ary avy eo mametraka fanontaniana hoe : “Mampiasa rora atao lakaoly kiraro ve ny Shinoa?” Na dia nesorina aza ity lahatsoratra ity taty aoriana, nisy ny gif namboarina avy amin'izany:
Midera am-piesoesoana ny finday Shinoa ny fanehoan-kevitra iray hafa nosoratan'i Fraol Habesha; mizara sarina finday mampiseho haavon'ny bateria 102 isan-jato izy. Raha zavatra tsara ny haavon'ny bateria avo indrindra, mampiseho endrika diso ataon'ny orinasam-pamokatra finday Shinoa ny sary tsy tena izy.
Fanamarihana sasany, toa ny an'i Feker Meri, mampifandray ihany koa ny eritreritra momba ny kalitaon'ny vokatra Shinoa amin'ny areti-mifindra coronavirus. Raha mora vaky ny entana ny sinoa, hoy ny nosoratan'ny mpanoratra, dia “maninona no maharitra toy izao ny otrikaretina coronavirus?”
Ahiahy fifehezana pan-Afrikanina momba ny kalitao
Tsy an'i Etiopia irery ny olana momba ny kalitaon'ny vokatra sy ny fotodrafitrasa Shinoa.
Milaza ny fitsapan-kevitra ho an'ny besinimaro momba ny fahitan'ny Afrikana an'i Shina fa manerana ny kaontinanta, ampifandraisin'ny olom-pirenena amin'ny vokatra ambany kalitao ny vokatra Shinoa. Milaza ireo fanadihadiana ireo fa ny kalitaon'ny vokatra shinoa no anton-javatra lehibe izay manimba ny lazan'i Shina any Afrika. Mihevitra ny Afrikanina maro fa aondrana any amin'ny tsena mandroso ny entana tsara kalitao, fa natao ho “toerana fanariana fako” ho an'ny entana Shinoa mora vidy sy ny fotodrafitrasa ambany kalitao kosa i Afrika. Nandà hatrany ny fiampangana azy ho manome tolotra sy vokatra ambany ho an’ Afrika ny governemanta shinoa, manasongadina ny anjara toeran'ny vidiny amin'ny famaritana ny kalitaon'ny entana. Milaza kosa na izany aza ny fandalinana ny adihevitra tao amin'ny haino aman-jery sosialy ao Etiopia fa tsy resy lahatra ny olom-pirenena Afrikana. Manomboka amin'ny tetikasa lehibe ka hatramin'ny entambarotra tsirairay, tsy raisina am-pankasitrahana ny tolotra shinoa fa amin'ny fanakianana, fisalasalana ary vazivazy kosa.
Ao anatin'ny fanadihadiana nataon'ny Civic Media Observatory momba ny fitantarana mifaninana mikasika ny Belt and Road Initiative ity tantara ity ary mitrandraka ny fomba fiheverana samihafa eo amin'ny fiarahamonina sy ny vondrom-piarahamonina mikasika ny fahitana ny mety ho tombontsoa sy ny voka-dratsin'ny fampandrosoana tarihin'ny Shinoa. Raha te hahalala bebe kokoa momba ity tetikasa ity sy ny fomba fiasany, dia tsindrio eto.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 01 Febroary 2021
Mpanao Sary Hosodoko Amin'ny Rindrina iray No Manao Sarinà Ahidratsy Erantany Mba Hisolo Tena Ny Sisim-piarahamonina
Amerika Avaratra 09 Septambra 2016